Qalabka Dayactirka Muuqaalka. Soo-kabashada Muuqaalka Muuqaalka. Qalabka Dayactirka PST.
DataNumen Outlook Repair waa ugu fiican Dayactirka Muuqaalka iyo qalabka soo kabashada adduunka. Waxay hagaajin kartaa faylasha musuqmaasuq ee 'Outlook PST' oo soo ceshan kara dhammaan emailada, xiriirada, jadwalka taariikhda, ballamaha, shaqooyinka, qoraalada, joornaalada, posts, iwm iyaga dhexdooda sida ugu macquulsan, taas oo yareyneysa luminta musuqmaasuqa faylka.
DataNumen Outlook Repair hore ayaa loogu yeeri jiray Advanced Outlook Repair.
Waayo, OST kabashada file iyo OST beddelka faylka PST, fadlan isticmaal DataNumen Exchange Recovery.
maxaad DataNumen Outlook Repair?
Heerka soo-kabashada waa most shuruudaha muhiimka ah ee soo-kabashada Muuqaalka Muuqaalka. Iyada oo ku saleysan tijaabooyinkayaga dhameystiran, DataNumen Outlook Repair leeyahay heerka ugu wanaagsan ee soo kabashada, aad uga fiican tartamayaasha kale, oo ay ku jiraan aaladda Dayactirka Inbox (scanpst) iyo aaladaha kale ee PST lagu dayactiro, suuqa!
Baro wax badan oo ku saabsan sida DataNumen Outlook Repair sigaar cabaya tartanka
Waxaan isticmaali jiray barnaamij kale oo aan ku waafajinayo aragtidayda
Xorriyadda Dhabta ah
St. Albans. Boqortooyada Ingiriiska
Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo DataNumen inc. caawimaaddaada iyo barnaamijkaaga software oo runtii shaqadeeda qabtay una oggolaaday qof aan khibrad badan lahayn
Waxaa laga yaabaa 8th, 2020
Qalabkaagu wuxuu ahaa mid gacan ka geystay soo kabashada dhammaan emaylkii xaaskeyga. Aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin adiga iyo kooxdaada oo dhan sida aad noo siisay badbaadintan iyo fudeydkan
Farriintani waxay u adeegtaa sidii AAD UGU MAHADSAN tahay qalabkaaga dayactirka Muuqaalka qurxoon. Macaamilkeyga waxaa la soo darsay koronto fara badan
Durban, Koonfur Afrika
Cusboonaysiinta MS Office ayaa burburay kombuyuutarkaygii waana inaan tirtiraa oo aan dib u dhigaa. Intii lagu gudajiray Muuqaalka ma aqbalin kii hore.ost
Waxaan soo degsaday barnaamijka dayactirka aragtidaada sababtoo ah fariimo khaldan oo joogto ah oo ku saabsan feylahayga Outlook.pst oo aanan si sax ah u xirmin
Isticmaalaha kombuyuutarka guriga
Qayb aad u fiican oo software ah oo sifiican u socota oo qoto dheer oo qoto dheer si loo helo tirtiray iyo lost emayllada. Waxaan ku guuleystey inaan soo ceshado qaddarin caan ah
Software-kani waa mid aad u wanaagsan. Runtii aad baan kuugu mahad naqayaa inaad soo bandhigto qalab muhiim ah (DataNumen Outlook Repair v 1.2 nooc buuxa) loogu talagalay
Nidaamka DATEL & Software FZ LLC
La taliyayaasha Nexus IT
Waxaan ku helay DVDRom ah zippst-faylka. Waan awooday inaan soo saaro wax walbana sifiican ayey u shaqeynayaan markale.Waxaan jeclaan lahaa inaan kaaga mahad celiyo
Suurtagal ma tahay in la caddeeyo goobta iyo magaca fayl kasta oo ku yaal tabta Dayactirka Dufcadda? Tani horeyba waa suuragal in tabka Dayactirka, goorma
Waqti kahor ayaan iibsanayaa Datanumen Outlook Repair waanan ku faraxsanahay, anigoo u isticmaalaya qaab marba mar. Hadda waxaan u baahanahay inaan ka soo ceshto emaylka la tirtiray ee farabadan NSF
Sebtember 13th, 2018
Waxaan u baahanahay inaan baaro oo tirtiro tan soo galaya
Diisambar 4th, 2018
Waqooyiga Vancouver, BC, Kanada
Advanced Outlook Repair wuxuu si buuxda u dayactiray 19GB Muuqaalka 2007 .pst oo leh faylal badan oo ka badan 15 sano. Waxay noqotay mid kharribmay ka dib dhib badan
Xalka Raacaya Khaladaadka Caadiga ah iyo Dhibaatooyinka Muuqaalka Muuqaalka PST
Qalabka Dayactirka sanduuqa ma soo ceshan karo waxyaabaha
Qalabka Dayactirka Sanduuqa sudhan
Khaladaad ayaa lagu ogaaday feylka xxxx.pst…
Dhibaatada faylka PST ee xad dhaafka ah (cabirka faylka PST wuxuu gaarayaa ama dhaafaa xadka 2GB).
Ha iloobin ama lumin sirta feylka PST ee sirta ah.
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen Outlook Repair v8.5
Taageero inuu ka soo kabsado farriimaha boostada, fayl, posts, kalandarka, ballamaha, codsiyada kulanka, xiriirada, liisaska qaybinta, shaqooyinka, codsiyada shaqada, joornaalada iyo qoraalada faylasha PST. Dhammaan guryaha, sida mawduuca, jirka farriinta, laga bilaabo, cc, bcc, taariikhda, iwm.
Taageero ku soo kabashada emayllada qoraalka cad, RTF iyo HTML.
Taageero si loo soo cesho walxaha gundhigga ah, sida emayl kale, Shaqooyinka Excel, Dukumiintiyada Erayga, iwm.
Taageero dayactir most oo ka mid ah faylasha PST ee Inbox Repair tool (oo sidoo kale loo yaqaanno Inbox tool ama scanpst.exe) ayaa ku guuldareysta inuu hagaajiyo qalabyada kale ee PST ee dayactirka ahna ma hagaajin karaan.
Taageero inuu ka soo kabto waxyaabaha la tirtiray ee Muuqaalka, oo ay ku jiraan farriimaha boostada, fayl, bosts, kalandarka, ballamaha, codsiyada kulanka, xiriirada, liisaska qeybinta, howlaha, codsiyada shaqada, joornaalada iyo qoraalada.
Taageero si loo soo kabsado faylasha 2GB ee weyn ee PST.
Taageero si loo soo cesho faylasha PST ee ugu ballaaran 16777216 TB (Ie 17179869184 GB).
Taageero si loo soo cesho feylasha la ilaaliyo ee PST-ga ah, labadaba la isku halleyn karo iyo sir badan (ama sifiican). Faylasha PST waa la soo ceshan karaa xitaa haddii aadan haysan lambarka sirta ah.
Taageero si loogu beddelo feylka PST-ka qaabka Muuqaalka 97-2002 loona beddelo Muuqaalka 2003-2019 / Muuqaalka qaab Office 365, Iyo ka dib.
Taageero si loo soo saaro faylka PST go'an qaab Muuqaalka 97-2002 iyo Muuqaalka 2003-2019 / Muuqaalka qaab Office 365.
Taageero lagu soo kabanayo xogta ku jirta faylasha PST ee musuqmaasuqa ama waxyeelleeyey ee iskaanka iyo qalabka dayactirka ee PST kale ma aqoonsan karo oo ma soo kaban karo.
Taageero lagu hagaajinayo "Ma guuri karo walxaha" khaladaadka faylasha Muuqaalka PST.
Taageero si loo xaliyo dhibaatada in Outlook PST /OST faylka waa gaabis ama lama jawaabo.
Wareegyo dhameystiran oo lagu xakameynayo sawirka, soo kabashada iyo wax soo saarka.
Taageero ka soo kabashada xogta Muuqaalka ee VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) faylasha (*. Vmdk), Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) files (*. Vhd), Acronis True Image files (*. Tib), Norton Ghost faylasha (*. gho, * .v2i), Windows NTBackup faylasha (*.bkf), Faylasha sawirka ISO (*. Iso), Faylasha sawirka Disk (*. Img), CD / DVD faylasha muuqaalka (*. Bin), Khamriga 120% Muraayada Disk Faylka (MDF) faylasha (*. Mdf) iyo faylasha sawirka Nero (* .nrg).
Taageero inuu ka soo kabsado xogta Muuqaalka laga soosaarayrary faylasha ay sameysay 'Outlook' markay masiibo xog dhacdo.
Taageero lagu dayactirayo faylasha PST-ga ee ku saabsan warbaahinta la musuqmaasuqay, sida diskiga diskiga, Zip saxannada, CDROM-yada, iwm.
Taageero lagu dayactirayo tiro ka mid ah faylasha PST musuqmaasuq ah.
Taageer si loo helo meesha faylasha PST lagu hagaajinayo kombiyuutarka maxalliga ah, sida ku cad shuruudaha raadinta qaarkood.
Taageerada isdhexgalka Windows Explorer, markaa waad awoodaatarta PST hawsha dayactirka oo ay la socoto macnaha guud ee Windows Explorer si fudud.
Taageer hawlgallada jiita & hoos u dhaca.
Taageero lagu dayactirayo faylka PST ee musuqmaasuqa ah iyada oo loo marayo xuduudaha xariiqda taliska.
Isticmaalka DataNumen Outlook Repair inuu ka soo kabsado Faylasha Musuqmaasuqa Muuqaalka PST
Marka feylashaada Muuqaalka PST ay kharribmaan ama dhaawacmaan oo aadan si caadi ah ugu furi karin Microsoft Outlook, waad isticmaali kartaa DataNumen Outlook Repair si loo baaro feylasha PST loona soo kabsado xogta feylasha sida ugu macquulsan.
Fiiro gaar ah: Kahor hagaajinta faylka PST ee musuqmaasuqa ama waxyeelada leh DataNumen Outlook Repair, fadlan xir Microsoft Outlook iyo wixii kale ee codsiyo ah ee wax ka beddeli kara faylka PST.
Xulo faylka PST ee musuqmaasuqay ama waxyeeloobay si aad u dayactirto:
Waxaad ku qori kartaa magaca faylka PST si toos ah ama waxaad riixi kartaa badhanka si aad u caleenta u xulato feylka. Waxa kale oo aad riixi kartaa badhanka si aad uga hesho faylka PST si loogu hagaajiyo kombiyuutarka deegaanka.
Haddii aad ogtahay nooca Muuqaalka ee isha PST faylka la hagaajinayo, markaa waxaad ku cayiman kartaa sanduuqa iskujira agtooda sanduuqa wax ka beddelka feylka, qaababka suurtagalka ah waa Muuqaalka 97-2002, Muuqaalka 2003-2010, Muuqaalka 2013-2019 / Office 365 PST feyl iyo Muuqaalka 2013-2019 / Office 365 OST faylka. Haddii aad uga tagto qaabka "Auto Determined", markaa DataNumen Outlook Repair iskaan doonaa faylka PST ee isha laga helayo si loo ogaado qaabkeeda si otomaatig ah. Hase yeeshe, tani waxay qaadan doontaa waqti dheeri ah.
Marka la eego, DataNumen Outlook Repair waxay keydineysaa xogta la soo helay fayl cusub oo lagu magacaabo xxxx_fixed.pst, halkaas oo xxxx uu yahay magaca faylka PST. Tusaale ahaan, ilaha PST ee laga helo Outlook.pst, magaca asalka ah ee faylka go'an wuxuu noqonayaa Outlook_fixed.pst. Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
Waxaad dooran kartaa qaabka faylka PST ee go'an sanduuqa combo agtooda sanduuqa wax ka beddelka faylka, qaababka suurtagalka ah waa Muuqaalka 97-2002 iyo Muuqaalka 2003-2019 / Office 365. Haddii aad uga tagto qaabka "Awood Go'an", ka dib DataNumen Outlook Repair wuxuu soo saari doonaa faylka PST-ga go'an ee la jaan qaadaya Muuqaalka lagu rakibay kombiyuutarka maxalliga ah.
Click ah batoonka, iyo DataNumen Outlook Repair doonaa start iskaanka iyo hagaajinta ilaha faylka PST. Bar horumarka
Nidaamka dayactirka ka dib, haddii faylka PST asalka ah si guul leh loo hagaajin karo, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale:
Hadda waxaad furi kartaa faylka go'an ee PST ee Microsoft Outlook. Dhamaan galka galkiisararchy dib ayaa loogu dhisi doonaa faylka PST ee go'an iyo emayllada iyo walxaha kale waa la soo kabsaday waxaana lagu ridayaa galka ay ku jiraan. Wixii loogu talagalay lost & walxaha la helo, waxaa lagu ridi doonaa faylalka Recovered_Groupxxx.
DataNumen Outlook Repair 8.5 waxaa la sii daayay Janaayo 26th, 2021
DataNumen Outlook Repair 7.8 waxaa la sii daayay Diseembar 8, 2020
DataNumen Outlook Repair 7.6 waxaa la sii daayay Oktoobar 31th, 2020
DataNumen Outlook Repair 7.5 waxaa la sii daayay Ogosto 8th, 2020
DataNumen Outlook Repair 7.2 waxaa la sii daayay Juun 19th, 2020
DataNumen Outlook Repair 7.1 waxaa la sii daayay Janaayo 22th, 2020
DataNumen Outlook Repair 7.0 waxaa la sii daayay Diseembar 30, 2019
DataNumen Outlook Repair 6.9 waxaa la sii daayay Sebtember 27th, 2019
DataNumen Outlook Repair 6.8 waxaa la sii daayay Juun 29th, 2019
DataNumen Outlook Repair 6.6 waxaa la sii daayay Maarso 28th, 2019
DataNumen Outlook Repair 6.5 waxaa la sii daayay Diseembar 28, 2018
Taageerada Muuqaalka 2019.
DataNumen Outlook Repair 6.0 waxaa la sii daayay Oktoobar 12th, 2018
Ku bixi koontaroollo badan qorista dayactirka.
DataNumen Outlook Repair 5.6 waxaa la sii daayay Juun 23rd, 2018
Muuqaalka Taageerada ee Xafiiska 365.
DataNumen Outlook Repair 5.5 waxaa la sii daayay Maarso 29th, 2018
Taageer inuu ka soo kabto fayl tirtiray iyo fariimo.
Taageerada Muuqaalka 2016.
DataNumen Outlook Repair 5.3 waxaa la sii daayay Luulyo 16th, 2015
Taageero lagu hagaajinayo "Ma guuri karo walxaha" qaladka faylasha Muuqaalka PST.
DataNumen Outlook Repair 5.2 waxaa la sii daayay 23 Sebtember 2014
Yaree isticmaalka xusuusta.
DataNumen Outlook Repair 5.1 waxaa la sii daayay 9 Luulyo, 2014
DataNumen Outlook Repair 4.5 waxaa la sii daayay 15-dii Abriil, 2014
Taageero ka soo kabashada xogta Muuqaalka ee VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) faylasha (* .vmdk), Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) files (* .vhd), Acronis True Image files (* .tib), Norton Ghost faylasha (* .gho, * .v2i), Windows NTBackup faylasha (*.bkf), Faylasha muuqaalka ah ee ISO (* .iso), Faylasha sawirka Disk (* .img), Faylasha muuqaalka CD / DVD (* .bin), Khamriga 120% Muraayada Disk Faylka (MDF) faylasha (* .mdf) iyo faylasha sawirka Nero (* .nrg).
DataNumen Outlook Repair 4.1 waxaa la sii daayay Febraayo 12, 2014
DataNumen Outlook Repair 4.0 waxaa la sii daayaa 12da Diseembar, 2013
Taageer Microsoft Outlook 2013.
DataNumen Outlook Repair 3.2 waxaa la sii daayay 3 Ogosto, 2010
DataNumen Outlook Repair 3.1 waxaa la sii daayay May 18, 2010
Hagaajinta ogaanshaha qaladka iyo ka shaqeynta warbixinta.
DataNumen Outlook Repair 3.0 waxaa la sii daayay Maarso 18, 2010
DataNumen Outlook Repair 2.5 waxaa la sii daayay Febraayo 10, 2010
Dayactir cilad u qaybinta faylasha waaweyn.
DataNumen Outlook Repair 2.1 waxaa la sii daayay 28-dii Abriil, 2009
Dayactir cillad ka shaqeynta fariinta qaladka.
DataNumen Outlook Repair 2.0 waxaa la sii daayay 5 Luulyo, 2008
DataNumen Outlook Repair 1.5 waxaa la sii daayay Maajo 28th, 2008
DataNumen Outlook Repair 1.4 waxaa la sii daayay Maajo 7th, 2007
Taageer Microsoft Outlook 2007.
DataNumen Outlook Repair 1.2 waxaa la sii daayay Oktoobar 9th, 2006
Taageer hababka soo kabashada ee horumarsan.
DataNumen Outlook Repair 1.1 waxaa la sii daayay 31-kii Diseembar, 2005
Taageero si loo ogaado qaabka faylka PST ee qaabka tooska ah.
Taageero si loo go'aamiyo qaabka faylka PST wax soo saarka si otomaatig ah iyadoo loo eegayo nooca Muuqaalka ee lagu rakibay kombiyuutarka maxalliga ah.
Taageero si loo helo loona xusho feylasha PST si loogu hagaajiyo kombiyuutarka maxalliga ah, sida ku cad shuruudaha raadinta qaarkood.
DataNumen Outlook Repair 1.0 waxaa la sii daayay Nofeembar 19, 2005
Qalab awood leh inuu ka soo kabto faylasha khaaska ah ee Microsoft Outlook galka (.pst).